Pochettino: “Dembele wuxuu qeyb ka heystaa tayada Maradona.” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Pochettino: “Dembele wuxuu qeyb ka heystaa tayada Maradona.”
Pochettino: “Dembele wuxuu qeyb ka heystaa tayada Maradona.”
Muqdisho – Macalinka Tottenham Mauricio Pochettino ayaa u tix-gelinaya laacibka Mousa Dembele mid kamid ah laacibiinta xulka ah ee uu abid ka dhinac shaqeeyey sida xidiggii reer Argentine ee Diego Maradona.
Tababaraha Spurs-ka ayaa horraanta 1990-meeyadii wuxuu si kooban kala dhinac ciyaaray xiddigan naadiga Newell’s Old Boys. Wuxuu sidoo kale Ronaldinho oo mar noqday laacibka adduunka kala ciyaaray Paris Saint-Germain iyo xidigo kale oo dhowr ah.
Pochettino ayaa u diyaarsan kamid dhigista laacibka Biljam u dhashay ee Dembele laacibiinta dunida raadeeyey – tiiyoo 29-jirkan uu kusoo muuqday xubnaha ugu muhiimsan White Hart Lane.
Wuxuu yiri: “Waxaan u sheegaa aalaaba; Mousa marka aan qorayo buugayga, waxaan kugu daraa laacibiinta doorka ah ee aan abid la shaqeeyey.”
“Mid wuxuu ahaa Maradona; midna Ronaldinho, Okocha iyo De La Pena.”
“Waxaan inta badan u sheegnaa in haddii aan ku qaadan laheyn da’da 18 ama 19-jirka uu noqon lahaa mid kamid ah laacibiinta ugu qaalisan dunida. Hubaalna waan ku qaadan lahaa da’da 18-jirka.”
“Haddii aad daacad tahay, waad igu raacaysaa aragtidayda.”
Dembele ayaa 28 kulan ciyaaaray dhamaan kulamada xilli-ciyaareedka isaga oo naadiga ka caawiyay inay ku nagaato afarta ugu sarreysa kala horreynta England PL iyo sidoo kale inay xejisato booskeeda horyaalka UCL.
Previous: Guardiola: “Hadday UK aysan rabin shisheeyaha, waan iskaga tagi doonnaa.”